ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အမူအကျင့်များ - စင်ပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဦး တည်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
dev Psychol ။ 2015 အောက်တိုဘာ; 51 (10): 1476-88 ။ Doi: 10.1037 / dev0000040 ။ EPub 2015 သြဂုတ် 10 ။
Doornwaard သည် SM1, Bickham DS2, ငွေရတတ်သောသူက M2, Ter Bogt TF1, ဗန်တွင်း Eijnden RJ1.
ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်အကြောင်းအရာ (SEIM) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ခွင့်ပြုထားသည့်လိင်သဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုထောက်ခံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုသုတေသနအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဆောက်လုပ်ရေးများအကြားဆက်နွယ်မှုများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမရှင်းလင်းပေ။
ဤလေ့လာမှုတွင် (က) မြီးကောင်ပေါက်များ၏ SEIM အသုံးပြုမှု၊ ခွင့်ပြုထားသောလိင်သဘောထားများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံရှိခြင်းတို့ကိုဆန်းစစ်ရန် longitudinal modeling, mean-level development နှင့် cross-lagged panel modeling ပေါင်း ၂ မျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆက်စပ် နှင့် (ခ) SEIM အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ longitudinal directionality အခြားတစ်ဖက်အပေါ် 1 လက်နှင့်အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ကိုသုံးပါ။
W4% ယောက်ျားလေးများ; အီး 1,132th တန်းဒတ်မြီးကောင်ပေါက် (မာဂုပညာရှိ T7 = 10 မှတဆင့် 1 13.95th ထံမှ 52.7-လှိုင်း longitudinal ဒေတာကိုသုံး) နှင့်ကျား, မများကဖြည့်ညှင်းအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ခန့်မှန်းဖြတ်မော်ဒယ်များ။
ဆိုလို-Level ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲယောက်ျားလေးရံဖန်ရံခါနှင့် ပို. ပို. ၎င်းတို့၏အလိုလိုသဘောထားတွေအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော 18 လလေ့လာမှုကာလ, ကျော် SEIM အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပြသ. Cross-lag panel panel များမှာယောက်ျားလေးများရဲ့ SEIM အသုံးပြုမှုကနေနောက်ဆက်တွဲခွင့်ပြုချက်သဘောထားတွေကိုအတည်ပြုခြင်းအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် SEIM အသုံးပြုမှုနဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားတသမတ်တည်းသောလမ်းညွှန်ချက်သက်ရောက်မှုများမတွေ့ရပါဘူး။.
မိန်းကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအတွက်တိုး၏အလားတူပုံစံပြသပေမယ့်သူတို့ရဲ့ SEIM အသုံးပြုမှုကိုတသမတ်တည်းအနိမ့်ခဲ့အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေသူတို့ရဲ့ထောက်ခံချက်အတွက် 18 လလေ့လာမှုကာလအတွင်းလျော့နည်းသွားသည်။
ယောက်ျားလေးများနှင့်မတူဘဲမိန်းကလေးများ SEIM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဤကျား - မတိကျသောတွေ့ရှိချက်များ၏သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။